Cabsi wayn oo soo wajahday Barcelona…(Lionel Messi oo……) – Gool FM
Cabsi wayn oo soo wajahday Barcelona…(Lionel Messi oo……)
Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi falls during the Spanish league football match Athletic Club Bilbao vs FC Barcelona at the San Mames stadium in Bilbao on August 28, 2016. / AFP PHOTO / ANDER GILLENEAANDER GILLENEA/AFP/Getty Images
(Catalonia) 07 Sebt 2016. Barcelona ayaa cabsi wayn ka qabta in Lionel Messi uu garoomada ka maqnaan karo muddo afar bilood ah haddii ay sii socdaan dhibaatada uu ka qabo gumaarka.
Dhaawacan ayaa dhibayay Messi usbuucyadii hore ee xilli ciyaareedka waxaana laga soo fasaxay waajibaadka xulkiisa qaranka usbuucii la soo dhaafay markii uu dib u soo laabtay xanuunka gumaarka.
29-jirka reer Argentina ayaa isniintii scan lagu marsiiyay Spain iyadoo ay Barca sheegtay inuusan jirin dhaawac halis ah.
Maanta oo arboco ah ayuu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda iyadoo ay dhab ahaantii jirtay inay dhaqaatiirtu ku taliyeen in saddex ilaa afar usbuuc oo nasiino ah la siiyo.
Uma badna in laacibka shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or uu ka soo muuqdo kulanka ay Barcelona sabtida la yeelan doonto kooxda Alaves.
Laakiin, Champions League ay usbuuca xiga la yeelan doonaan Celtic iyo kulanka xiga ay Atletico Madrid la ciyaari doonaan waxaa la arkaa in Barca ogolaato in Messi uu xanuunka ku ciyaaro.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warineysa in kooxdu raaceyso daraasad caafimaad taa oo tilmaameysa afar istaraatiijiyad oo lagu daweynayo dhibka Lionel Messi.
Midka koowaad iyo kan labaad waxaa la sheegay inay durba shaqeyn waayeen. Halka daraasada afaraad ay tilmaameyso in qalliin la marsiiyo kabtanka xulka Argentina taa oo keeni karta inuu garoomada ka maqnaado saddex ilaa afar bilood.
Antonio Conte oo sheegay booska uu u isticmaali doono David Luiz
DAGAALKA TWITTER-KA: ''Carragher haddii aad tahay taageere Balotelli funaanaddiisa waad naga dalban kartaa'' - Nice oo jawaab jees jees ah bixisay!